जापान काम गर्न जाने अवसर ! २३ सय नेपाली कामदार लैजादै,भाषा र सीप परीक्षा लिन सुरु ! अरु के-के आवश्यक पर्छ ! – Khabar Silo
काठमाडौँ । जापान रोजगारीमा नेपाली युवाको अपेक्षित सहभागिता हुन नसकिरहेका बेला जापानले झण्डै दुई हजार बढी का’मदार लैजाने तयारी गरेको छ । जापान फाउण्डेशनले यही जनवरीमा एक हजार र आगामी मार्चमा एक हजार ३०० नेपाली का’मदार लैजाने तयारी थालेको छ । फाउण्डेसनले एक सूचना जारी गरी परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेको हो ।